माधव नेपालले मतदान गरेको वडामा एमाले चौथो, राजपाले मार्‍यो बाजी
२०७४ असोज ४ बुधबार, रौतहट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालकै वडामा एमाले पराजीत भएको छ । ... बाँकी अंश»
विहान ३ बजेसम्म महानगर सहितका स्थानीय तहहरुमा कुन दलको स्थिती कस्तो ? (सूची सहित)
२०७४ असोज ४ बुधबार, काठमाडौं । तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक महानगर सहित ३ उपमहानगरपालिकामा निर्वाचन भईरहेको छ । ... बाँकी अंश»
विहान साढे २ बजेसम्म कुन पार्टी कति ठाउँमा अगाडि ? प्रतिशतमा हेर्नुहोस्
२०७४ असोज ४ बुधबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको लगभग १ सय ३५ वटै स्थानीय तहमा मतगणना सुरु भईसकेको छ । ... बाँकी अंश»
९५ स्थानीय तहको प्रारम्भिक नतिजा : ‘मधेशवादी’ राजपा भन्दा ‘मधेशविरोधी’ एमाले अगाडि !
२०७४ असोज ३ मंगलबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको लगभग १ सय ३५ वटै स्थानीय तहको प्रारम्भिक मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ । ... बाँकी अंश»
मन्त्रिपरिषद् विस्तारले संवैधानिक निकायबीचको दायित्व अवमूल्यन भयो : आयोग
२०७४ असोज ३ मंगलबार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारले सोमबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय सच्याउनको लागि सरकारसँग आग्रंह गरेको छ । ... बाँकी अंश»
वीरगञ्जमा काँग्रेसलाई फोरमले टक्कर दिने, के भन्छन् अजय र विजय ?
२०७४ असोज ३ मंगलबार, पर्सा । प्रदेश २ को सर्वाधिक चासोको स्थानीय तह वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा काँग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । ... बाँकी अंश»
गोलबजार नगरपालिकामा भारी मतले माओवादी अगाडि, दोस्रोमा एमाले
२०७४ असोज ३ मंगलबार, काठमाडौं । सिराहाको गोलबजार नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले अग्रता हाँसिल गरेको छ । ... बाँकी अंश»
तेस्रो चरण निर्वाचनमा ७७ प्रतिशत मतदान, सबैभन्दा बढी रौतहटमा
२०७४ असोज ३ मंगलबार, काठमाडौँ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा असोज २ गते सोमबार भएको निर्वाचनमा ७७ प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
विहान ४ बजेसम्मको प्रारम्भिक मतगणनाको एकमुष्ठ अवस्था हेर्नुहोस्
२०७४ असोज ३ मंगलबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको पहिलो प्रारम्भिक मतगणनामा नेपाली काँग्रेसले दुईवटा स्थानीय तहमा अग्रता हाँसिल गरेको भने नेकपा एमाले र संघीय समाजजादी फोरमले एक एक स्थानमा अग्रता हाँसिल गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
पहिलो प्रारम्भिक नतिजामा एमाले भारी मतले अगाडि, काँग्रेस चौथो
२०७४ असोज ३ मंगलबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको पहिलो प्रारम्भिक मतगणनामा नेकपा एमाले भारी मतले अगाडि देखिएको छ । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाको पहिलो २ सय मत गन्दा एमालेले ९१ मतका साथ पहिलो स्थान हाँसिल गर्न सफल भएको हो । ... बाँकी अंश»
मध्यरातबाट सुरु हुँदैछ २ नं प्रदेशमा दलहरुको भाग्य परीक्षा
२०७४ असोज ३ मंगलबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको मत गणना सुरु हुन केही समय मात्रै बाँकी रहेको छ । ... बाँकी अंश»
सन्दर्भ असोज ३ : संविधानको भविष्यमाथि उठेका शंका मेटिए त ? के भन्छन् विज्ञ ?
२०७४ असोज २ सोमबार, काठमाडौं । सरकारले असोज ३, अर्थात् नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाउने तयारी गरेको छ । ... बाँकी अंश»
स्थानिय तहको चुनाव सकियो,निर्वाचनमा सहयोगलाई प्रधानमन्त्रीले दिए धन्यवाद
२०७४ असोज २ सोमबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको अन्तिम चरणको निर्वाचन उत्साहपूर्वक सम्पन्न भएकामा सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रदीप पौडेलले भने ‘जापानमा सिंगो देशको अपमान भएको ठहर गरी नेपाल फर्किएको हुँ’
२०७४ असोज २ सोमबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जापानको अध्यागमनमा आफूमाथि भएको अपमान सिंगो मुलुकमाथिको अपमान भएको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ असोज २ सोमबार, काठमाडौं । आईतबार विहानै डेढ दर्जन प्रहरी आएर विज्ञापनले रंगिचंगी बनाएको तीनकुनेको टिभिएस स्टललाई क्षत विक्षत बनाए । ... बाँकी अंश»
दिउँसो १ बजेसम्म करिव ५३ प्रतिशत मतदान
२०७४ असोज २ सोमबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा आज प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा जारी मतदानमा दिउँसो १ बजेसम्म करिव ५३ प्रतिशत मतदान भएको पछिल्लो जानकारी प्राप्त भएको छ । ... बाँकी अंश»
गोपाल खड्कालाई 'पदमुक्त' गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२०७४ असोज २ सोमबार, काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बनमा राखेर छानविन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ... बाँकी अंश»
माधव नेपाललाई नै मतपत्र पट्याउन नआएपछि....
२०७४ असोज २ सोमबार, रौतहट । स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सोमबार भइरहेको छ । ... बाँकी अंश»